Ngwa iji wepu ụda site na igwefoto Galaxy S5 | Akụkọ akụrụngwa
Esi ewepu ụda igwefoto site na Samsung Galaxy S5
Mgbe ụfọdụ ndị ọrụ America enwere nhọrọ iji wepu ụda site na igwefoto Galaxy S5N'ọtụtụ nsụgharị nke nnukwu ekwentị a, ị ga-ahụ na ọ gaghị ekwe omume. Inwe ịhọrọ ụzọ ọzọ iji nwee ike mechie ụda mkpuchi nke igwefoto ahụ, ebe ọ bụ na n'oge ụfọdụ ụda ọ na-eme nwere ike ịbụ ezigbo iwe mgbe anyị nwere ike ịnọ na ụlọ ihe nkiri ma ọ bụ ihe ngosi ebe ịgbachi nkịtị bụ iwu.
Ọ bụ ihe ijuanya na n'ime ekwentị dị elu dị oke mma dịka Samsung Galaxy S5, bọtịnụ iji kwụsị ụda nke igwefoto adịghị na nsụgharị ya niile, na-eche na ha nwere ihe kpatara ha enweghị itinye ya dị ka ọkọlọtọ. . Ọzọ anyị ga-egosi gị otu n'ime ụzọ ịgbachi nkịtị a arụmọrụ nke mere na ị nwere ike ise oké foto na-agbachi nkịtị na-enweghị na-enye nsogbu onye ọ bụla.
Inwe ike ịrụ foto na-enweghị ụda mkpuchi kamera anyị ga-achọ ịwụnye ngwa na Galaxy S5 nke ga-ahụ maka ịkwụsị ya kpamkpam.
La a na-akpọ ngwa Enforced Stream Silencer ị ga-ebudata ya site na njikọ a ebe ọ bụ na ọ dịghị na Storelọ Ahịa Play. Install wụnye ya wee gbalịa ịse ọtụtụ foto iji hụ ka ụda kamera na-akpasu iwe mgbe ụfọdụ anaghịzi eme. Iji wụnye ngwa ahụ, ị ​​ga-arụ ọrụ nhọrọ iji wụnye site na "isi mmalite amaghị" na ntọala.
ngwa nke nwere ihe ọ bụla karịa 15kb Na na ị nwere ike iwepụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwe ụda nke igwefoto gbagoro ọzọ na ekwentị gị Galaxy S5.
Chetara gị na ị nwere ike iji ngwa a ogbi na shutter na ndị ọzọ gam akporo smartphones,, ebe ọ bụ nhọrọ nke ndị nrụpụta na-eleghara anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Esi ewepu ụda igwefoto site na Samsung Galaxy S5
Ndewo, ekele maka isiokwu ahụ, ọ dị m ezigbo mma.
Ikwu na m iwepụla ngwa ma igwefoto ka anaghị ada ụda. Ma eleghị anya, mgbe m gbanyụrụ ya ma gbanye ya, arụ ọrụ ahụ amalitegharịrị, mana ugbu a ihe niile dị mma.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka onyinye a, ngwa dị mma, ugbu a enwere m ike iwepu ụda ahụ na-akpasu iwe site na igwefoto na-enweghị s5 na-agbachi nkịtị. daalụ.
Zaghachi ka ịkpọọ
Ọ na-arụ ọrụ zuru oke na S6 na lollipop 5.1.1.
Ezigbo ngwa !!! Ọ rụrụ ọrụ dị ukwuu nye m, na Samsung Galaxy A5… M na-akwado ya, ndị enyi, ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu! Daalụ nke ukwuu…
Ndewo. M arụnyere na ngwa na ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma ugbu a, m na-ewepụ ya igwefoto ka nwere ụda. Kedu ka m ga-esi gboo ya?
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma .. M nwere ike ikwu na ngwa .. ọ na o siri ike na-ewe ohere?
[E3 2014] Nchịkọta nke ogbako Microsoft
Laghachi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Chromebook anyị